यस वर्ष विवाहको लगन सार्वजनिक, लगनगाँठो कस्ने योजना बनाइरहेका युवायुवती प्रभावित हुने | Nepalkakura
Home गृहपृष्ठ राष्ट्रिय यस वर्ष विवाहको लगन सार्वजनिक, लगनगाँठो कस्ने योजना बनाइरहेका युवायुवती प्रभावित हुने
यस वर्ष विवाहको लगन सार्वजनिक, लगनगाँठो कस्ने योजना बनाइरहेका युवायुवती प्रभावित हुने
२१ वैशाख, काठमाडौं । वैदिक विधिअनुसार विवाह गर्न चाहनेका लागि विसं ०७७ मा जम्मा १८ वटा मात्र लग्न निस्किएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ ।
वर्षको पहिलो महिना वैशाखमा सबैभन्दा बढी अर्थात् सातवटा लगन निस्किएको समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए । वैशाखको १३, १४, १९, २०, २२, २३ र २५ गते लग्न जुरेको समितिले स्वीकृति दिएका पात्रो (पञ्चाङ्ग) मा पनि उल्लेख छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न जारी बन्दाबन्दीका क्रममा यी सबै लग्न सकिनेछन् । गत चैत ११ गतेदेखि कोभिड–१९ को संक्रमणबाट बच्न सरकारले बन्दाबन्दी गरेको छ । वैशाख २५ गतेपछि पनि बन्दाबन्दी बढ्ने सम्भावना हुनसक्छ । पहिलो महिनामा दिइएको वर्षकै सबैभन्दा बढी विवाहको लग्न बन्दाबन्दीमै सकिने भएपछि यो वर्ष लगनगाँठो कस्ने योजना बनाइरहेका युवायुवती प्रभावित हुने भएका छन् ।
यसैगरी, जेठको ४, ५, १० र ३१ गते गरी चारवटा लग्न छ । असारमा ११, १३ र १४ गते तीनवटा मात्र लग्न छ । मंसिरको १६, २१, २२ र २६ गते गरी चारवटा मात्र लग्न निस्किएको समितिले जनाएको छ । यस वर्ष मंसिरपछि विवाहको लग्न छैन । माघ र फागुनमा वृहस्पति एवं शुक्र ग्रह अस्त हुने भएकाले विवाहको लग्न ननिस्किएको अध्यक्ष गौतमले सुनाए ।
यस वर्ष जेठ १७ गते शनिबार पश्चिममा शुक्र अस्त भई २६ गते सोमबार पूर्वमा उदय हुन्छ । यसैगरी, माघ ४ गते आइतबार वृहस्पति पश्चिममा अस्त भई फागुन २ गते आइतबार नै पूर्वमा उदाउने छ । माघ ३० गते शुक्रबार शुक्र पूर्वमा अस्त भएपछि ०७८ लागेपछि मात्र उदाउने भएकाले यस वर्ष माघ र फागुनमा विवाह एवं व्रतबन्धका साइत ननिस्किएको समितिले जनाएको छ । यसैकारण चैतमा व्रतबन्धको साइत पनि छैन ।
बृहस्पति (गुरु), शुक्र अस्त भएका बेला गृहप्रवेश, घर निर्माण आरम्भ (गृहआरम्भ), सप्ताह श्रवण, यज्ञयागादिलगायत शुभकर्म पनि गर्नुहुँदैन । “गुरु, शुक्र अस्तका बेला नित्य रूपमा गरिने पूजा, पाठ, जप आदि गर्नुहुन्छ, यसैगरी नैमित्तिक रूपमा गरिने श्राद्ध, काजक्रिया, बालक जन्मँदा जातकर्म गर्नुहुन्छ, कुनै फलको कामना राखेर गरिने काम्य कर्म गर्नु हुँदैन, यसैले विवाह, व्रतबन्ध, गृहप्रवेश, गृहारम्भको साइत नदिइएको हो,’ उनले भने ।
विगत वर्षमा माघ र फागुनमा समेत विवाहको मुहूर्त हुन्थ्यो । महिनाका हिसाबले माघ र फागुन विवाह गर्न हुने नै महिना हुन् । ०७६ मा भने विवाहका ६६ लग्न थिए ।
यसैगरी, यस वर्ष व्रतबन्धको मुहूर्त पनि चार वटा मात्र छ । वैशाख २१ र २२ गते, जेठ १२ एवं असार ११ गतेमा मात्र व्रतबन्धको लग्न जुरेको समितिका सदस्य सचिव एवं पञ्चाङ्गकार सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले बताए । गत वर्ष भने व्रतबन्धका साइत १२ वटा थिए । गत वर्षहरुमा माघ, फागुन र चैतमा पनि व्रतबन्धका मुहूर्त दिइएको हुन्थ्यो ।
Previous articleकोरोना संक्रमण भई १४ दिन अस्पताल बसेर घर फर्किएका एक व्यक्ति पुनः अस्पताल भर्ना
Next articleनेपालमा एकैदिन १० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि